Google Pixel 6 ine kamera ipi uye ndeyei chaizvo ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Iyo Pixel 6 uye 6 Pro inoratidzira toni yeinonakidza tekinoroji, kusanganisira 120Hz LTPO kuratidza uye yakatsaurirwa Tensor processor. Ivo zvakare vane kamera nyowani, iyo isingataurwe nezvakawanda. Mafoni eGoogle agara achitora mifananidzo yakanaka, asi mhando nyowani dzakagara dzakasarira kumashure kwemakwikwi maererano nehardware. Dzimwe nguva kunonoka kwaisava ikoko chete, asi kwaisvika makore matatu. Saka nepo foni yakatora mafoto akanaka, kamera pachayo yakanga isati yashandurwa mumakore. Ikozvino yakazogadziridzwa, uye nekutarisa kweGoogle pamakomputa mafoto, izvi zvinofanirwa kuchinja zvishoma.
Zvaimboshamisa kuti kunyangwe iyo Pixel 5a, yakaburitswa kutanga kwa2021, yakashandisa sensor isina shanduko kana ichienzaniswa nePixel 2 ya2017. Chokwadi, kambani yakaedza ne-ultra-wide-angle uye telephoto lenses. , asi zviitiko izvozvo zvakanga zviri kure zvikuru.
Pixel 6 Series gadzirisa kushaikwa kwekufambira mberi uku iine ma sensors matsva emifananidzo uye matipi esoftware ayo anozounza tarisiro kudzosa mafoni kuchimiro chavo chepamusoro. Saka ngatitarisei zvakanyanya kuti chii chachinja pamusoro pezvigadzirwa zvitsva, sei zvakasiyana, uye zvazvinoreva kunyika yekutora mifananidzo.
Makamera eGoogle Pixel ndiwo akanakisa
Hazvina ngozi kutaura kuti ichangoburwa maGoogle makamera haasati ari emazuva ano munzira dzese. Semuyenzaniso, hapana yakakura zoom ye telephotoinowanikwa mune mamwe ma brand. Asi zvatiinazvo zvichiri zvakamirirwa kwenguva refu.
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti iyo Pixel 6 Pro ine hombe selfie kamera ine resolution 11,1MPSaizi yepixel yemuviri 1,22 μm nekuvhura f / 2,2, nepo yakajairwa Pixel 6 ine chete 8 Mn, pixel saizi 1,12 μm uye reshiyo yekuvhura f / 2,0yakashandiswa neGoogle paPixel 5.
Zvichida shanduko huru paPixel 6 uye 6 Pro kushandiswa kweiyo yakakura mufananidzo sensor. Iyo diki 363 / 1-inch Sony IMX2,55 sensor yakazotsiviwa neyakakura 1 / 1,31-inch primary sensor. Mukuenzanisa, iyo huru sensor paGirazi S21 Ultra ndeye 1 / 1,33 inches. Mune mamwe mazwi, idiki zvishoma pane iyo inoshandiswa neGoogle. Shanduko iyi chete, zvimwe zvinhu zvakaenzana, zvichatoreva kutorwa kwechiedza uye kushoma ruzha mumifananidzo. Naizvozvo, kupfura kwehusiku kuchave kuri nani kunyangwe usati wagadziriswa.
Ndeapi masensa ari muGoogle Pixel kamera
Google haina kudoma masensa ainoshandisa, asi Samsung ingangoita Isocell GN1 kune iyo huru sensor uye Isocell GM2 kune telephoto lens. Zvakakosha, iyo Isocell GN1 inoshandisa Samsung's Bayer Tetrapixel sefa. Iko kuunganidzwa kwemapikseli kunobvumira kutora mifananidzo ye50 uye 12,5 megapixels kubva kune imwechete kamera. Google inoda mifananidzo ye12MP, uye iyi modhi inotipa mapixel saizi anoshanda ari pedyo ne2,4µm. Mukuenzanisa, yaingova 1,4 µm pamberi.
Pamusoro pezvo, iyo GN1 inopa Smart-ISO kuwana optimization yechiedza uye yakaderera mwenje. Pane zvakare sarudzo ye Bata kuratidzwa kwakawanda panguva imwe chete kuwedzera HDR kupfura uye vhidhiyo isina zvipoko, pamwe nekugona kugadzira 100 megapixel mifananidzo uchishandisa mwenje data ine mbiri-pixel autofocus. Asi kune izvo, Google inofanirwa kuita basa rakadaro kune yayo Super Res Zoom kana chimwe chinhu chakafanana.
Nyaya yakafanana inomuka kana uchitarisa zoom kamera yePixel 6 Pro. Isocell GM2 yakakura kudarika Sony IMX481 yakashandiswa muPixel 4. Zvakare, iyi i pixel musanganiswa sensor, saka tinogona kutarisira kuti 1,6 µm pixels kuburitsa gumi nemaviri. MP mifananidzo pano, kunyangwe iyo 12 MP modhi inogona kuve neimwe mukana mumasikati zvakare. Iyo GM48 haingope akakura mapixels, asi zvakare inopa akawanda-kuratidzwa kubatwa kuburikidza neSamsung's WHDR, zvichikonzera kupenya uye kuratidzwa-yakanyatso kuratidzwa mifananidzo ye zoom.
Iyo Pixel 6 Pro ine 4x optical zoom lens, ichienzaniswa ne2x iyo Pixel 4 (iyo Pixel 5 yakanga isina zoom kamera). Izvi zvichavhara mutsauko pakati pekureba kweiyo huru uye zoom kamera pasina kuderera zvakanyanya kunaka.
Yakafara angle kamera yeGoogle Pixel
Google yakapa mashoma mashoma pane yayo yekupedzisira-yakafara kamera sensor, zvichiita kuti zviome kuona mhando yayo. Kana Google ikashandisa Samsung kwese kwese, inogona kunge iri Isocell 2L5, kunyangwe kugadzirisa kwayo kuri 13MP chete. Kune vakawanda, izvozvo zvingaita sezvisina kukwana.
Tinoziva kuti kamera ine mapixels makuru kupfuura gore rapera, asi yakapiwa kugadziriswa kwepasi, inogona kunge yakafanana nehukuru hwekunzwa sePixel 5. Izvi zvichava nemigumisiro yakanaka pamagetsi ane simba uye kugadzirisa chiedza chekutora.
Uye zvakare ine yakakwira yekutarisa kona muchizvarwa chino: 114 madhigirii, kumusoro kubva 107 madhigirii zvisati zvaitika. Izvo hazvina kunyanyoita seGirazi S21 Ultra kana iyo iPhone 13, ari madhigirii zana nemakumi maviri, asi chokwadi cheiyo yakawedzera angle yatove yakanaka.
Pasina mufananidzo kudzikamisa kana autofocus, iyo yekupedzisira-yakafara kamera ingangove idiki shanduko yakaitwa neGoogle kune yayo kamera system, asi inofanirwa kunge ichiri kukwikwidza kupfuura kare.
Iine masensa akakura akasanganiswa neiyo yepamusoro ISO uye HDR tekinoroji, iyo Pixel 6 nePixel 6 Pro inozviita zvese nemakanoni ekutora mifananidzo: kujeka kwakawanda, kuri nani. Tichifunga nezvekumira kwakaita iyo Pixel Hardware yaive isati yabuda chizvarwa chechitanhatu, iyo nyowani hardware inofanirwa kupa kusvetuka kukuru mumhando yemufananidzo.
Iyo Google Pixel 6 kamera ndiyo yakanyanya kunaka
Zvisinei, usatarisira Google algorithm pamusoro uye basa reiyo processor nyowani pane yakagadziridzwa kamera sensors inongoita kuti ive yakanyanya kunaka. Asi kuchinja kwakanaka kuchiri kuuya.
Iyo Google Pixel 6 ine Magic Eraser, Face Unblur, Real Tone, Night Sight, uye mamwe maficha epamberi esoftware, nekuda kwehunyanzvi hwayo hwekudzidza muchina, hunobatsira kuburitsa zvirinani kunaka kwemifananidzo.
Yaive musanganiswa wehardware uye software yakagadzira yapfuura Pixel Mafoni Mafoni makuru ekupfura. Iyo Pixel 6 inofanira kunge iri nani. Sezviri pachena kambani yakaneta nekunzwa kushoropodzwa pamusoro payo nguva dzose uye yakasarudza kuti mushure memakore matatu inogona kupa vashandisi chimwe chinhu chitsva.